FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA SAKA TERRIER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika saka Terrier Dog
Toy Rat Terrier puppy miaraka amin'i Maggie, Toy Rat Terrier ary Buffy, zana-trondro Toy Rat Terrier izay milanja 5 kilao daholo.
Lisitry ny alika miteraka rat terrier
Ny Rat Terrier dia alika mihetsika tsara miaraka amin'ny tratra lalina, soroka matanjaka, hatoka mafy ary tongotra mahery. Kambana ny vatany nefa feno hena. Ny sofina dia mety atsangana na tendrena ary entina miarina rehefa mailo ny alika. Izy io dia azo ateraka miaraka amin'ny rambony fohy na lava halavany, tavela eo amin'ny toetoetrany voajanahary na miantsona amin'ny roa andro. Ny loko palitao dia misy perla, sabla, sôkôla, mena sy fotsy, tri-spaced, solid solid, black and tan, manga sy fotsy ary brindle mena. Ireo mpiompy miahiahy amin'ny alika miasa dia tsy saro-kenatra amin'ny pitsopitsony amin'ny tarehy.
alika weiner sy yorkie mifangaro
Ny Rat Terrier dia alika manan-tsaina, mailaka ary be fitiavana. Tena manontany tena izy ary velona. Ity alika be fitiavana ity dia mahatonga namana tsara ho an'ireo izay mankafy alika mavitrika. Tsara amin'ny ankizy izy ireo, indrindra raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely izy ireo. Izy ireo, amin'ny ankapobeny, dia sariaka amin'ny olon-tsy fantatra. Ny Rat Terriers dia manao mpitily tsara. Haingana ireo alika ireo, milalao ary tsy mpihinana. Ny fomban'ireto alika ireto dia madiodio. Ny toetra mahavelona, ​​feno feisty ary tsy misy tahotra dia hita amin'ny toerana tsara indrindra. Vonona ny hampifaly sy hamaly izy ireo ary haka fiofanana haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny alika. Ny Rat Terrier dia alika tsara fomba sy mahitsy. Mora ny mampiofana, maniry fatratra ny hianatra sy hahafaly ny tompony. Tian'izy ireo ny miaraka aminao ary manao izay ataonao. Tena mahay milomano ihany koa izy ireo, tsy milomano na matahotra ary tsy manana olana amin'ny rano. Izy ireo dia manao alika fiompiana tsara ary alika ao amin'ny fianakaviana tena tsara ho an'ny biby fiompy sy fiarahana. Ity alika mafy orina ity dia ampiasaina amin'ny fihazana dia an-tsambo ary koa asa tertera. Ny alika olon-dehibe dia afaka mizatra mora foana amin'ny fianakaviana misy na tsia. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena izay mety ahitana olana ara-paritany. Tadidio foana, alika dia alika canines fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Ny Rat Terrier dia tonga amin'ny habe telo samihafa.
Standard: Haavo 14 - 23 santimetatra (35½ - 58½ cm)
Fenitra: lanja 12 - 35 pounds (5½ - 16 kg)
Ambony refy: Haavo 8 - 14 santimetatra (20 - 35½ cm)
Ambony habe: lanja 6 - 8 pounds (3 - 3½ kg)
Kilalao: haavo: 8 santimetatra (20 cm)
Kilalao: lanja: 4 - 6 pounds (2 - 3 kg)
inona no yorkie sy Shih Tzu Mix antsoina hoe
Rat Terriers dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha mbola mahazo fanazaran-tena 20-30 minitra farafahakeliny. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tokony hanana tokotany kely na salantsalany farafaharatsiny. Ratsy Terriers tia mihady, ary afaka mivoaka mora foana amin'ny tokotanin'ny fefy izy ireo. Raha manana fiarovana tsara izy ireo, dia afaka mandany fotoana be any ivelany. Tian'izy ireo ny ao anaty trano sy any ivelany mba milalao.
Ny Rat Terrier dia mila fanatanjahan-tena betsaka. Ity karazana ity dia mila raisina isan'andro mandeha lavitra na jogging. Tokony hanana 20-30 minitra isan'andro farafahakeliny, fa hankafy bebe kokoa. Ny lalao dia mankafy lalao sarotra sy romp any ivelany.
Ny Rat Terrier dia mora taovolony. Ny fikosehana sy ny fikosehana tsindraindray hanalana ny volo maty no ilaina.
Nomena ny fahitana an'i Teddy Roosevelt, ny Rat Terrier dia novolavolaina tany Grande-Bretagne izay avy tamin'ny Fox Terrier malefaka ary ny Manchester Terrier tamin'ny 1820. Nentina tany Etazonia izany tamin'ny 1890. Tamin'izany fotoana izany dia loko mainty sy mainty avokoa izy ireo. Ny Life Magazine dia nampiseho ny filoha Roosevelt niaraka tamin'ny Terror Black Black sy mainty. Ireo mpiompy amerikana dia niampita azy ireo indray niaraka tamin'ny Fox Terrier malefaka ary koa ny Beagle SY Whippet . Ny Beagle dia nampitombo ny fahafaha-manao betsaka, ny lalana ary ny fihazana, miaraka amin'ny loko mena. Ny Whippet dia nanome ny hafainganam-pandeha sy ny hakingana ary angamba ny loko manga sy brindle. Ny karazany kely indrindra dia nalaina avy tamin'ny Fox Terrier malefaka SY Chihuahua . Ny Rat Terrier dia nanjary iray amin'ireo tsara indrindra tao an-davaka fihinana voalavo. Iray Rat Terrier no voalaza fa namono voalavo maherin'ny 2.501 tao anatin'ny fito ora monja tao amin'ny fitoeram-boalavo feno voalavo. Ny Rat Terrier dia tanimboly miasa mafy, afaka manala ny verin'omby feno bibikely tsy misy olana. Ny Rat Terrier dia neken'ny AKC tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2013.
pads fanafanana ho an'ny alika kely vao teraka
NRTR = Registra nasionaly Rat Rat
RTBA = Fikambanan'ny mpiompy voalavo
RTCI = Rat Terrier Club Iraisam-pirenena
UKCI = Universal Kennel Club Iraisam-pirenena
Kitapo Rat Terriers, Disney, Freddie, Secret ary Penny
'Moo the Rat Terrier amin'ny 6 volana dia tia mitsambikina sy manenjika baolina mihodina. Moo no anarany satria ny pentina mainty dia toy ny omby azy. '
Noel ilay Ratsy Terrier mainty sy fotsy faly nandry tao anaty bozaka.
Dagwood 2 taona ity. Sary natolotr'i Anne Blair
Hijery ohatra misimisy momba ny Rat Terrier
Sarin'i Terrier Rat 1
Rat Terrier Sary 2
Rat Terrier Sary 3
Decker Hunting Terrier Dog Fampahalalana momba ny fiompiana
alika lahy 2 ve afaka miara-miaina
karazana mixer mpiandry ondry alemanina
Shih Tzu sy fotsy volo
cur, vava mainty
alika fohy pointer weimaraner afangaro alika kely